Vanofamba pasi rose nerunyararo uye kusagadzikana - Nyika Kurume
Unogona kubhuka izvozvi iro bhuku renyika yechipiri kufora
Tsamba yenyika isina mhirizhonga
Musangano pamhando dzekubatana
Latin American Kurume
Forums uye Conferences
musha » Noticias » Press Notes » Vanofamba pasi rose nerunyararo uye kusagadzikana
Vanofamba pasi rose nerunyararo uye kusagadzikana
12 / 07 / 2021 kubudikidza Antonio Gancedo
Kutanga kufamba kwepamutemo kwe "Senderistas del Mundo por la paz y la nonviolencia"
Musi waChikumi 27, 2021, kufamba kwekutanga kwepamutemo kwe "World Trekkers for Peace and Nonviolence" kwakaitwa.
Iri rekutanga boka rekutanga re Senderistas erunyararo uye kusagadzikana, rakaumbwa kunyanya nevechidiki kubva kuguta rinonzi San Marcos de Tarrazú, uye vavakidzani vanobva munzvimbo yevatsvene, sekuzivikanwa kwenzvimbo ino, vari veRuwa rweSan José muCosta Rica. Nekubatana pamwe negwara rehunyanzvi pazvinhu zvekukwira makomo zveSanti Montoya.
Zvinoenderana nenhungamiro dzayo, chinangwa cheichi chitsva Action Front chesangano revanhu, Nyika isina Hondo uye isina mhirizhonga, ndeye Kurudzira kugadzirwa kwepasirese kusagadzikana kwekuziva kuburikidza nekufamba musango.
Kubudikidza nekusimudzira zviitiko zvekuvaraidza zvekukwira, muboka, nenzira yakachengeteka uye inotungamirwa,
uko pamusoro pekuwana mabhenefiti echiitiko chataurwa, basa rinoitirwa iyo
tsvaga kuwirirana uye pachako, kwemagariro, kusimudzira munharaunda, pamwe nehunhu, mukumisikidza mhando dzese dzemhirizhonga dziripo.
Munguva dzino dzekuoma kwekuita zvechisimba, pfungwa iyi yekuunganidza kumakomo inounzwa, inotarisirwa kuve sarudzo yezviitiko munyika dzese makumi matatu nenhatu umo Nyika Isina Hondo uye pasina mhirizhonga inoshanda, uye inoshanda senzira yekuratidzira munharaunda, pamwe nekuzadzikiswa kwetsika dzinoshanda mukusimudzira kukura uye kusimbisa kwemukati mevanhu uye panguva imwe chete, zvakare zvinobatsira kuvandudza zvirongwa zvemuno zvekushandurwa kwevanhu, kuchengetedza nharaunda uye kurukwa kwekubatana manetwork uye vanhu. nharaunda kwadzinoshanda.
Akarongeka mapoka ekukwira makomo anotarisirwawo kujoina uye kutora chikamu nekufora kumusoro kwavo kumakomo panguva ye Kutanga Latin American Kurume kwekusagadzikana, iyo ichaitika kubva munaGunyana 15 kusvika Gumiguru 2.
Senderistas del Mundo yerunyararo uye kusagadzikana.
Vanotanga mabasa avo muCosta Rica, seInternational Action Front yeNyika isina Hondo uye pasina mhirizhonga.
Kuziva Runyararo Chiitiko mumoyo wegomo reCerro Frío muCosta Rica.
Categories Press Notes Kubatikiti kufamba
Kurume kweNonviolence inofamba kuburikidza neLatin America
1 taura nezve «Senderistas del Mundo yerunyararo uye kusagadzikana»
Pingback: Mharidzo yekutanga kwekuLatin America kufora kwemarudzi mazhinji uye tsika dzakasiyana isiri mhirizhonga - SurcosSurcos
Panyaya yeku Middle East
Tsamba muSolidarity nevanhu veColombia
CYBERFESTIVAL Yemahara yezvombo zvenyukireya
© 2021 Yakagadzirwa ne 4P Marketing